नोबेल कोरोना भाईरस र डेढ करोडको गाडी - Bidur Khabar
नोबेल कोरोना भाईरस र डेढ करोडको गाडी
विदुर खबर २०७७ वैशाख २९ गते १७:३१
देश अहिले अवस्थामा कोरोना भाईरसका कारणले डामाडोल भैइरहेको अबस्थामा जहाँ कि पानी जहाज चल्ने ठाउनै नभएको नेपालमा पानी जहाज कार्यालयको लागि भनेर एक करोड ४३ लाख रुपैयाँको गाडी किन्नु के उपयुक्त होला र ?
देशमा अलि कति पढे लेखेको ब्यक्ति अस्ट्रेलिया अमेरिका र जापान अनि केही मात्रा रहेका बुद्दिजिबि बर्ग अबकाश जीवनपछि पनि आयुक्त र राजदुत हुन पाइन्छ कि भन्दै झोला बोक्दै धाउने । देशमा बिदेशी छिरेर ८० किमि बाटो खनिसक्दा पनि थाहा नहुने सरकार के कान मा तेल हालेर सुतिराको हो र ? शासन पद्दतीमा शासक भएर जनताको गाँस बाँस र कपासको ब्यबस्था गर्नु पर्ने ठाउमा आफ्नै आसे पासेलाई के कसरी हुन्छ खल्ति भर्न अगाडि बढ्ने अनि हामी निमुखा जनताले के महसुस गर्ने सरकार ? के यहि अबस्था हेर्न अनि यहि ब्यबस्था देख्न हामीले १९ दिने जनआन्दोलन गरेर लेराको हो गणतन्त्र ? आजभन्दा भोलिभन्दा भोकै मर्न पर्ने अबस्था आई सक्यो । बिरोध गर्न आउनेलाई लकडाउनको उल्घनन गर्यो भनेर थुन्ने । अझ नभए कर्फु नै लगाउने यो तरिका ठिक हो ? भिम उपाध्याय जो राम्रो कामको प्रशंसा र नराम्रो कामको खबर्दारी गर्छन के उनलाई पक्रनु राम्रो थियो ? ज्ञानेन्द्र शाही दिन प्रतिदिन भोकमरिमा परेका जनताहरुलाई राहत बड्छन के उनलाई पक्रनु ठिक थियो ? के हामी ले बोल्नै नपाउने के यहि हो वाक स्वतन्त्रता भनेको ?
हिजो राणा र राजा फालेको हामी आज तपाईं को २ तिहाई को दम्ब देखेर डराउने छैनौ तपाईंलाई तपाईंको बोलिको दम देखेर जनताले पत्याएको हो तर अब सायद यो दिन आउने छैन ईतिहासमा फर्किएर ! राम्रो काम गर्न सरकारमै हुनु पर्छ भन्ने छैन । बहिर बसेर वा सेवामै रहेर पनि राम्रा काम गर्ने गोबिन्द के.शि, कुलमान घिसिङ ,सन्दुक रोहित , धुर्मुस सुन्तली ,महाबिर पुनलाई किन चाहियो २ तिहाई ? काम गर्न तिहाई र चौराई भन्दा पनि ईच्छा शक्ति हुनु पर्छ उनीहरु आआफ्नो कामले नै हिरो भएका हुन ।
यति सानो देश मा हुनु न खानु को डाडै पिच्छे महाराज राखेर शासन गर्ने नाउ मा सिंह दरवार गाउँगाउँमा भनेर ती शासक बर्गलाई हामीले कर तिरेर पाल्नु पर्ने ? कता जाँदै छ मेरो देश, भस्ट्राचार भन्ने नाम सुन्न सक्दिन भन्ने तपाईं आज ७० करोड को कुरो कहाँ पुग्यो ? निर्मला हत्याकाण्ड को हत्यारा खोइ ? ३३ क्लिन्टन सुन को ठुलोमाछा को हो ? अलि कति पनि देश को चिन्ता छैन सरकार ? हाम्रो हनुमानढोका दरबार बन्दा अमेरिका भन्ने देश नै थियन तर आज तेहि हनुमान ढोका दरवारको चुकुल बिग्रदा अमेरिकासँग गुहार मागेर बनाउनु पर्छ ।
हाम्रो देशको सान र परिचय धरहारा भत्किएको आज ५ बर्ष नाग्यो त्यसलाई बनाउने भन्दा बढि खर्च तपाईं र तपाईका आसेपासेले खर्च गरिसक्नु भयो । अलिकति पनि अप्ठ्यारो लग्दैन ? देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन धरासायी हुँदै छ । सानो परियोजनामा पनि अन्य देशको अनुदान सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने देशमा आलिसान महल र लक्जरी गाडी चड्नु राम्रो हो र ? २००७, १५ र ३६ सालको विभिन्न आन्दोलन सुनेको भएतापनि ०४६, र २०६२ ÷६३ को आन्दोलन भोगेको पनि छौ हामिले ! हिजो रोल्पा हाम्रा दाजु भाइले बन्दुक उठाएर फालेको राजतन्त्र आज यहि देख्न लाई हो ?
जानकारी होस हिजो राणा र राजा फालेको हामी आज तपाईं को २ तिहाई को दम्ब देखेर डराउने छैनौ तपाईंलाई तपाईंको बोलिको दम देखेर जनताले पत्याएको हो तर अब सायद यो दिन आउने छैन ईतिहासमा फर्किएर ! राम्रो काम गर्न सरकारमै हुनु पर्छ भन्ने छैन । बहिर बसेर वा सेवामै रहेर पनि राम्रा काम गर्ने गोबिन्द के.शि, कुलमान घिसिङ ,सन्दुक रोहित , धुर्मुस सुन्तली ,महाबिर पुनलाई किन चाहियो २ तिहाई ? काम गर्न तिहाई र चौराई भन्दा पनि ईच्छा शक्ति हुनु पर्छ उनीहरु आआफ्नो कामले नै हिरो भएका हुन । तर तपाईंहरु पाटी हाक्ने साथै देश हाक्ने ब्यक्ति ।
कोरोना चेक गर्ने कीटमा समेत कमिसन खाने भने पछि अब केमा चाहिँ बाँकी राखेको होला,कमिसन खान जो कोईले पनि सोचनिय कुरा हैन र यो ?
लेखक आचार्य सामाजिक अभियान्ता हुन ।